နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အာမေးနီးယားခရစ်ယာန် ဘုန်းတော်ကြီး Very Rev. Fr. Zaven Sargis Yazichyan အား လက်ခံတွေ့ဆုံ – Myanma Daily
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် မြန်မာ၊ စင်ကာပူနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဆိုင်ရာ အာမေးနီးယားခရစ်ယာန် ဘုန်းတော်ကြီး (Armenian Apostolic Orthodox Church) Very Rev. Fr. Zaven Sargis Yazichyan အား ယနေ့ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံ တွေ့ဆုံသည်။
တွေ့ဆုံစဉ် မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူနည်းစုသာရှိသည့် အာမေးနီးယား အသိုက် အဝန်းနှင့် အာမေးနီးယား ဘာသာစကား၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် အမွေအနှစ်တို့ကို ကြည့်ရှု စောင့်ရှောက်ပေးပါရန် ဆွေးနွေးသည်။
ထို့ပြင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် ဘုန်းတော်ကြီးနှင့်အတူ လိုက်ပါလာသော မြန်မာ-အာမေးနီးယား မျိုးနွယ်စု မိသားစုဝင်ဖြစ်သည့် ဦးရစ်ချက်မိုင်းနက်စ်နှင့် ဒေါ်ရေချယ် မိုင်းနက်စ်တို့ကိုလည်း တွေဆုံအားပေးစကားပြောကြားသည်။ Myanmar State Counsellor office